एकाएक किन रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन ? सिंगो केन्द्रीय समिति नै खिलापमा — Sanchar Kendra
एकाएक किन रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन ? सिंगो केन्द्रीय समिति नै खिलापमा
काठमाडाैं । नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको रौनक बढे पनि नेपाली काँग्रेसमा भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेस कार्यतालिका हेरफेरमै रुमलिएको छ ।
६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
यीमध्ये रसुवा बारा र रौतहट क्रियाशील सदस्यता सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । यसले महाधिवेशनबारे अन्योल थपेपछि काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।
महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक सीमा पार भइसक्दा नेताहरु तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा छन् । वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति नै महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कैलालीको कार्यक्रममा महाधिवेशन गर्ने कुरा आफ्नो हातमा नरहेको बताएका छन् ।
काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको निर्वाचन समितिको हातमा रहेको देउवाको भनाइ छ । १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोग भएजस्तै काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न स्वतन्त्र निर्वाचन सिमित छ । पार्टीको निर्वाचन कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै बाढी–पहिरो लगायतका कारण समस्या भएको बताए । दुई वर्षसम्म अधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवाले यतिबेला बाढी पहिरोको तर्क झिकेका छन् । उता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफू सधैं महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताए ।
सिंगो केन्द्रीय समिति महाधिवेशनको खिलापमा ?
केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिर रहेका युवा नेताहरुले भने महाधिवेशन फेरि सार्ने तयारी भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेता रञ्जित कर्णले समयमा महाधिवेशन नहुनुमा सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति जिम्मेवार रहेको बताए ।
पार्टीको विधान र नेपालको संविधानप्रति इमान्दार केन्द्रीय सदस्यले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘पार्टीको विधान र नेपालको संविधानप्रति इमान्दार हो भने आफूलाई नयाँ पुस्ता आँक्नेहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिनुपर्छ’ कर्ण भन्छन्, ‘महाधिवेशन गराउन नसक्ने, नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने, एउटा बैठक पनि बहिस्कार गर्न नसक्ने, एउटा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नसक्ने ? बाहिर भाषणा मात्र ठूला गर्ने ?,’ कर्णको प्रश्न छ ।
काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको सिंगो केन्द्रीय कमिटी अवैधानिक हुनमा सिंगो केन्द्रीय कमिटीको मिलोमतो रहेको उनको आरोप छ । ‘लोकतन्त्रका लागि जन्मिएको पार्टी होइन नेपाली काँग्रेस ? सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति अवैधानिक भइसक्यो । अब राजीनामा नदिएर बाहिर मिडियामा बोल्नुको कुनै अर्थ छैन,’ कर्णले भन्छन्, ‘महाधिवेशन गराउने विषयमा नेतृत्वलाई दबाव पटक्कै पुगेको छैन । सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति नै महाधिवेशन नगराउने मिलोमतोमा छ ।’
महाधिवेशन गराउन दबाव दिन आफू आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि कर्णले बताए । यस्तै काँग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले काँग्रेसको चरित्र नै गुम्ने खतरा बढेको बताए ।
​काँग्रेसको महाधिवेशन तोक्दै स्थगित गर्दा गर्दै पार्टीको विधान र संविधानले दिएको समय सीमा कटिसक्दा पनि नेतृत्व गम्भीर नबनेको उनको आरोप छ ।